Sesike saloba kaningana ngentokazi yakwaMchunu ethanda usiko, uMichelle kule-website. Kuloku le ntokazi isichicelele ngezithombe nangama-video yomemulo eyenzelwe abazali bayo, beyibonga ngokuthi igcine ubuntombi bayo yaze yaphuma eminyakeni yobusha. Ngike sengithatha ithuba, ngabuza imibuzo ngenhloso yokuqonda kabanzi usuku lwayo ukuze ngishicelele lapha, kufunde nabanye, bathole ulwazi. Nalu uhlelo lwe ngxoxo yethu. Ngicela usiphe ulwazi kabanzi ngokuthi […]
By Siboniso Langa in Environment 0
Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yenhlonipho nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyanaba, sithi ukugxamalaza kancane ngendaba yenhlonipho njengoba sidlulela ekuhlonipheni igceke kanye nothango lomuzi njengoba ekuqaleni sigxile esibayeni semfuyo. Igceke Njengoba sisho nje ukuthi umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa […]
The jury seems to be out when it comes to people’s perception of snakes, or izinyoka. It seems that in some cases the snake is revered as a link to the ancestors, and in others its presence is considered a bad omen, but it in all instances, there’s a definite respect associated with snakes in […]
Last week we wrote about attempts that are being made to preserve indigenous languages in South Africa, so this week we thought we would take a more in-depth look at some of the reasons that isiZulu, and other African languages, are under threat. An article published a few years ago on Afropolitan.co.za provides great insight […]
Thina sizwe sikaPhunga noMageba sidume ngezinto eziningi, okubalwa kuzo ukuzigqaja ngamasiko nezinkolelo zethu, kanti ke nenhlonipho iyona futhi esaziwa ngayo kakhulu kusuke ebuncaneni bethu. Ukuhlonipha kwethu ke akugcine ekuhlonipheni abantu, noma ke nezilwane kuphela kepha sihlonipha ngisho nemvelo kanye nemizi esihlala kuyo nayo. Kulelikhasa senaba ngendaba yokuhlonishwa komuzi wesintu, okuhlanganisa nesibaya kanye negceke ukubalula okumbalwa. […]
Amagama asuselwa emagameni ezilwane
Ingosi yokuchaza ngomsuka wagama esizwa abantu abaningi besizwe sakwaZulu sebebizwa ngawo siyivala ngokoxoxa ngamagama asuselwa ezilwaneni. Usolwazi esimhlonipha kakhulu, uNobuhle Ndimande uveza ukuthi kubantu abangamaZulu, ukhona umkhuba wokwetha abantwana amagama asuselwe emagameni ezilwane. Ngokuchaza kukaNdimande (2001) empeleni lo mkhuba awugcini kumaZulu kuphela kodwa ukhona kubeNguni, bonke nakwamanye amazwe aseNtshonalanga naseMpumalanga Afrika. Izizathu zalo mkhuba zahlukene […]